Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - Garyaqaan Xashiishad - Tom Howard - Xaqiijinta Sharciga Ganacsiyada Marijuana & Hemp
Cinwaanka websaydhku waa: https://www.cannabisindustrylawyer.com.
Markaad soo gasho, waxaanu sidoo kale samayn doonaa dhowr cookies si loo keydiyo macluumaadka login iyo shaashadahaaga muujinaya doorashooyinka. Kukiyada galitaanka waxay socotaa laba maalmood, iyo shaashadaha kala duwan ee shaashadu waxay soconayaan sannad. Haddii aad dooratid "Xusuusin", waxaad geleysaa laba toddobaad. Haddii aad xisaabiso koontadaada, koontooyinka furaha ayaa laga saari doonaa.
Sida aan u ilaalino macluumaadkaaga
Waa maxay nidaamyada jebinta xogta aan hayno
Waa maxay saddexaad ee aan helno xogta
Maxay yihiin go'aan qaadashada automated iyo / ama ku dhajinta aan ku sameyno macluumaadka user
Shuruudaha shaacinta shuruudaha